ညီလင်းသစ်: ကျနော်နှင့် မြန်မာစာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 6.12.09
ဘီယာက ထားတဲ့သက်တမ်းနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
မြန်မာဘီယာက သက်ဆိုင်သူတွေဆီလည်း ကျနော် Feedback ပေးလိုက်မယ်။
ပုဂံက ဘူးဖေးဆိုင်လေးတွေကို သတိရသွားမိတယ်ဗျာ
အမှန်ပဲ အကိုရေ..။ မြန်မာဘီယာ အရည်အသွေး လုံးဝကျသွားတယ်..။ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ မို့Tiger ပဲ သောက်လာခဲ့ရတယ်..။
It would be more mouth watering if you label what the dishes are. I couldn't quite tell what are the dishes. Thanks for sharing.
သနားလို့သိပ်မတောင်းခဲ့ဘူး..။ ပုဂံညနေခင်းတွေကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ..ရင်ထဲမှာလွမ်းသလိုဆွေးလို ဖြစ်လာတာဗျ..။
ကိုဝိုင်တီယူ ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တချို့ဘီယာပုလင်းတွေ ဆိုရင် ဆိုင်မှာ ရောက်နေတာ အတော်ကြာနေတဲ့ပုံပဲ၊ ဒါပေမယ့် စည်ဘီယာဆိုရင် တော့ ဒီ့ထက် ပိုလတ်ဆတ်မယ် ထင်ရပေမယ့် သူလည်း ပုလင်းတွေထက် ပိုမကောင်းပါဘူးဗျာ... :(
ကိုနေညိုရင့်နဲ့ ကျနော်နဲ့တော့ အကဲဖြတ် အရည်အသွေး လာတူနေပြီဗျို့...။ :D
ှSint...yeah, it was originally my idea, too, to label them but I, myself, am not sure anymore what they exactly are. So..I let the readers' guess and imagination grow up freely...lol.
ကိုဖြိုးရေ...နောက်တစ်ခါဆို တောင်းသာတောင်းဗျ၊ အားနာစရာ မလိုပါဘူး၊ ကျနော် သူတို့ကို အင်တာဗျူး လုပ်ဖူးတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အမြတ်ကျန်ပါ တယ်တဲ့..။ အဲဒီဆိုင်တွေရဲ့ ပေါ်လစီကိုက အဝစားပဲလေ။ :)
ဟင်းပန်းကန်အောက်မှာ စာတန်း ထိုး ပေးထားရင် ပို ကောင်း မှာနော်...
ညီလင်းရေ.. ပုဂံမှာတော့ တိုးတိုးဝင်း နဲ့ ထနောင်းရိပ်ဆိုင်တွေကို ဗမာစာမှာ အကြိုက်ဆုံး.. ခုတော့ ဘလိုနေသေးတယ် မသိ...
ချဉ်ပေါင်ကြော် စားချင်လိုက်တာဗျာ ။
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော်လည်း ပထမ စာတန်းထိုးဖို့ စဉ်းစားသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ဘယ်ဟာကဘာမှန်း မသိတော့တာနဲ့ ဒီလိုပဲ ထားလိုက် ရတာ...အဟီး၊
တိုးတိုးဝင်းကတော့ အတော်လေး ကျသွားတယ်လို့ ပြောကြတယ်၊ ဒေသခံတွေကအစ recommend မလုပ် တော့ဘူး၊ ထနောင်းရိပ်ကတော့ ကောင်းတုန်းပဲ ထင်တယ်၊
ကျနော်နဲ့ ညီနဲ့တော့ တူနေပြီဗျာ၊ ကျနော်လည်း ကြိုက် တယ်၊ ဒီနိုင်ငံမှာက ကျန်တာတွေ ရနိုင်ပေမယ့် ချဉ်ပေါင် တော့ လုံးဝ မရဘူးဗျ...။ :(